हावामा बिलायो सपना सपना सपना रयो.. – Dainik Samchar
March 17, 2021 375
पोखरा — सँगै तालिम लिइरहेका साथीसँग सैनिक जवान राजाराम राना मगर सुनाउँथे, ‘प्याराग्लाइडिङको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्छु, देशलाई मेडल दिलाउँछु ।’ धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका–२ का २३ वर्षीय राजाराम प्याराग्लाइडिङ अभ्यासकै क्रममा सोमबार फेवातालमा खसे । उपचार क्रममा उनको मृत्यु भयो ।पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम भवन बाहिर मंगलबार छोराको शव कुरिरहेका कुलबहादुरले भने, ‘खै, छोराको सपना अब हावामै बिलायो । पानीमा डुब्यो ।’ यति भन्दानभन्दै उनी भक्कानिए । यतिमात्र भन्न सके, ‘अलि कम बोल्थ्यो । सानैदेखि आँटिलो थियो । देशको नाम राख्छु भन्थ्यो ।’
कुलबहादुर स्वयं नेपाली सेनाको हवलदारबाट १५ वर्षअघि अवकाश निस्किएका हुन् । जेठो छोरा ऋषि ७ वर्षअघि सेनामै भर्ती भए । उनी लेस नायक दर्जामा छन् । कान्छो छोरा राजाराम १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ४ वर्षअघि रौतहटबाट सेनामा छानिए । उनको कार्यक्षेत्र रसुवाको कालीजंग गण भयो । दुई वर्षअघि सेनाले प्याराग्लाइडिङ टिम बनायो । उनी पनि रोजाइमा परे । २० जनाको समूहसँगै उनले तालिम लिन थाले ।उक्त टिमले काठमाडौंको प्याराग्लाइडिङ स्कुल एसियन एकेडेमीसँग एक वर्षको ‘बिगिनर्स कोर्स’ गर्‍यो । त्यतिबेलै कोरोना महामारीले लकडाउन सुरु भयो । तालिम रोकियो । प्याराग्लाइडिङ आर्मी क्लबले हेर्ने भएपछि राजाराम काठमाडौंमै बसे । गएको दसैं बिदामा घर गए । दसैंपछि तालिम पुनः सुरु हुने खबर पाएर काठमाडौं फिर्ता भए ।
दुई महिनाअघि टोली पोखरा आइपुग्यो । अभ्यास सुरु गर्न एक महिना लाग्यो । बिगिनर्स कोर्सपछि सहभागीले पोखरामा आएर आफैं अभ्यास गरिरहेका थिए । समूहमा १७ सैनिक जवान, एक पदिक र दुई अफिसर गरी २० जना छन् । तीमध्ये २ महिला छन् । सोमबार दिउँसो राजारामले सराङकोटबाट फेवातालमाथि सोलो उडान भरिरहेका थिए । आकाशमै थिए टिमका अन्य सदस्य पनि । एक सैनिक जवानका अनुसार ‘स्पाइरल डाइभ’ गर्ने क्रममा उनी हेर्दाहेर्दै तालमा खसे । तालको उपल्लो तट ‘इन्ड अफ दि लेक’ नजिकै २ः१५ बजे उनी ग्लाइडरसँगै डुबे । अभ्यासकै क्रममा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै राखिएको सेनाको टोली उनको उद्धारमा जुट्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुवास हमालका अनुसार उद्धारकै क्रममा उनी अचेत थिए । तत्काल पोखराको रानीपौवामा रहेको आर्मी अस्पताल पुर्‍याइयो । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार हुँदाहुँदै साँझ ४ः४५ मा उनको निधन भयो ।
सेनाको टोलीले बुधबारदेखि एसआईभी कोर्स थाल्ने तयारी थियो । त्यसका लागि एसियन एकेडेमीले पोखराको हवाई क्षेत्र प्रयोगका लागि प्याराग्लाइडिङको नियामक निकाय नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) सँग अनुमति मागेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीका अनुसार राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन एसआईभी कोर्स गर्नुपर्छ । यो कोर्स प्यारापाइलटको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । उडाइरहेको ग्लाइडरले काम नगर्दा कसरी वैकल्पिक ग्लाइडरको प्रयोगबाट सुरक्षित हुने भन्ने यो कोर्समा सिकाइन्छ । यो कोर्स पानीमाथि नै गर्नुपर्ने भएकाले पोखरामा अभ्यास गराइन्छ । दुर्घटनाको नक्कलस्वरूप अभ्यासको क्रममा प्यारापाइलटले आफैं ग्लाइडर फाल्छन् । केही समयको ‘फ्रि फल’ पछि कम्मरमा बाँधिएको अर्को ग्लाइडर खोलेर सुरक्षित अवतरण गर्छन् । दुर्घटनापछि भने उक्त कोर्स सुरु हुने/नहुने अन्योल छ । पोखरामा अभ्यासका क्रममा सैनिक जवानको निधन भएकाले उनको सम्मानस्वरूप बुधबार सोलो तथा व्यावसायिक सम्पूर्ण उडान बन्द गरिएको नाका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
राजाराम दुर्घटनामा परेको खबर सोमबार कुलबहादुरले कालीजंग गणबाट पाए । उनी सिकिस्त भएकाले बुबाआमालाई पोखरा आउन भनियो । कुलबहादुरले पत्नी राधाकुमारी र भाइलाई साथैमा लिएर आए । पोखरा आएपछि मात्र उनले राजारामको निधन भइसकेको थाहा पाए । आफ्नो आँखाले नदेखेकाले भवितव्य नै भएको उनी ठान्छन् । पोस्टमार्टमपछि राजारामको सैनिक सम्मानसाथ पोखरामै अन्त्येष्टि गरिएको छ । प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाबारे सैनिक मुख्यालयबाट निर्णय गरेर छानबिन हुने पोखरास्थित पश्चिम पृतनाका जनसम्पर्क अधिकृत प्रेमप्रसाद पौडेलले बताए ।
Prevकपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ? त्यसोभए अपनाउनुस् यो सजिलो घरेलु उपाय, हुनेछ बाक्लो!
Nextखुसीको खबर: भर्खरै अनीसालाई लगियो जे’ल, हुने भयो यती क’ठोर स’जाए (भिडियो सहित)